झुपडीका चम्किला तारा रवि : म्यादी प्रहरीदेखि नेपाल आइडलसम्म
Posted on December 21, 2018 December 21, 2018 by Npnews
काठमाडौँ । रबि ओड नेपाल आइडल सिजन २ को बिजेता बन्न सफल भएका छन । त्यसै गरि अस्मिता थर्ड रनरअप, सुमित सेकेन्ड रनर अप र बिक्रम फर्स्ट रनरअप बन्न सफल भएका छन ।
जितसंगै रविले होन्डा डब्ल्यु आर भी कार र २२ लाख रुपैया पुरस्कार पाएका छन् । फर्स्ट रनर अप बिक्रम बरालले २० लाख रुपैया, सेकेन्ड रनर अप सुमित पाठकले १५ लाख र थर्ड रनरअप अस्मिता अधिकारीले होन्डा स्कुटर पुरस्कार पाएकी छन् ।
टप ४ सबैले ट्रफी र वोर्ल्ड टुरको कन्ट्रयाक पनि प्राप्त गरेका छन् ।
केही सातादेखि सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिर भाइरल भइरहेको थियो । जुन तस्बिरमा म्यादी प्रहरीको पोशामा थिए भविष्यका लागि संघर्ष गरिरहेका एकजना युवा । उनी अरू कोही नभएर गरिबीसँग जुध्दै अनेक संघर्षका साथ हुर्किएका दोस्रो नेपाल आइडल बन्न सफल उनै रवि ओड ।
नेपालको पश्चिमी सीमामा अवस्थति कन्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकास्थित टाउको निहुराएर छिर्न पनि मुस्किल पर्ने एउटा सानो टायलको झुपडीमा जन्मिएका थिए । उनै रवि, शुक्रबार पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको नेपाल आइडल सिजन २ को ग्रान्ड फिनालेका विजेता घोषित भए । वि.सं. २०५४ साल चैतमा टायलको त्यही सानो झुपडीमा जन्मिएका रवि बुवा राजेन्द्र र आमा उमा ओडका तेस्रो सन्तान हुन्।
उनका बुवा राजेन्द्र अहिले पनि भारतमा पालेको काम गर्छन्, परिवार पाल्नका लागि । रविका हजुरबुवा पहाडी जिल्ला छामबाट बसाइँ सरेर कञ्चनपुर झरेका थिए। रविका हजुरबुवा र बुवा जीविका चलाउने गतिलो स्रोत खोज्दै अछामको साँफेबगर नगरपालिका (साविक बुढाकोट गाविस) बाट कञ्चनपुर झरेका थिए ।
गरिबीकै कारण उनका बुवा र हजुरबुवाले भारतमै ‘पाले’को काम गरेर दुर्इ चार पैसा कमाउँदैछन् । कमजोर आर्थिक हैसियत भएका रविलार्इ उनको सपनाको उडान भर्न पैसाले रोकेन । हजुरबुवाको प्रेरणाले संगीतमा लागेका रवि यसअघि नै सेलिब्रेटी भइसकेका थिए । नेपाल आइडल सिजन २ को विजेता बनेसँगै अब आर्थिक रूपमा पनि उनको जिन्दगी फेरिएको छ ।
नेपाल आइडलको धनगढीमा भएको अडिसनमा पुग्नुअघि उनी गाउँमै हुने सांगीतिक प्रतियोगितामा भाग लिन्थे भने धनगढी पुगेर दोहोरी साँझमा गाएर पैसाको जोहो गर्थे। सुदूरपश्चिमबाट अन्तिम चारमा पुगेका एक्ला प्रतिस्पर्धी उनलार्इ जिताउन कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अभियान नै चलाइएको थियो । फाइनलमा जित्नका लागि भोटमात्रै निर्णायक थिएन, जजको पनि मन जित्दै उनले नेपाल आइडल सिजन २ मा आफूलार्इ सर्वोत्कृष्ट गायक सावित गरे ।
उनले आफ्नो क्षेत्रक देउडा गीतलार्इ नेपाल आइडलको मञ्चमार्फत् संसारभर फैल्याए । उनी देउडा जति सुमधुर गाउँथै उति नै पोख्त थिए पप र आधुनिक विधाका गीतमा पनि । संघर्षपूर्ण बाल्यकालबाट गुज्रिएका उनी जब गाउँथे सबैलार्इ बाँधेर राख्न सक्थे । संगीतको औपचारिक शिक्षा नलिएर पनि रविले ‘ढुंगाको काप फोडेर पनि उम्रन्छ पिपल’ भन्ने नेपाली भनाइलार्इ साँच्चिकै चरितार्थ गरिदिएका छन् ।
रविको जीवन कम्ता संघर्षपूर्ण थिए । उनी २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भएका थिए भन्दा जोकोहीले पत्याउँदैन । परिवार पाल्न र आफ्नो दैनिक खर्चका लागि उनी २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी पनि बनेका थिए । उनले म्यादी प्रहरी बनेर राष्ट्रको सेवा त गरे नै त्यससँगै केही आम्दानी पनि गरे जसले उनको जीवन चलाउन केही समय सहज भयो ।
हजुरबाको प्रेरणाले बालकालदेखि नै गुनगुनाउने रविको गीत सुन्न उनलार्इ जन्म दिने आमा अहिले यो दुनियाँमा छैनन् । तर उनलार्इ जुन आमाले हुर्काइन् जन्म दिने आमाको कहिल्यै कमी हुन दिइन्न । भारतमा पाले बनेका बाबुले रविलार्इ जिताउन भोट माग्दै हिँडेका थिए । परदेशमा रहेका बुवाले यो खबर सुनेपछि पक्कै हर्षका आँसु बगाए । – अन्नपूर्णपोस्टबाट
दोस्रो नेपाल आइडल रवि ओडका भाईहरुसंग केही दिन अघि लिएको अन्तरवार्ता
काठमाडौँ । नेपालको सुदुर पस्चिम छेत्रबाट छनोटमा परि नेपाल आइडलमा सहभागी रबि ओड अन्य प्रतिस्प्रधीलाई पछि पार्दै बिजयी बनेका छ्न । केही समय अघि मात्र उनका भाइहरुसग गरिएको कुराकानीमा सुदुर पच्चिम क्षेत्रकै एक मात्र प्रतिभावान प्रतिस्प्रधी भएका कारण पनि रबि ओड नै बिजयी बन्नेमा आफुहरु ढुक्क भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । अत्यन्त बिपन्न र गरिब परिवारमा जन्मिएका रबि ओडले नेपाली साङ्गितिक छेत्रमा एउटा नया आयाम दिने सम्भावनाको बृहत् ढोका खोलेका छन। अहिले उनको बिजयबाट परिवार मात्र होइन उनको गृह जिल्ला र सुदुरपश्चिम क्षेत्रमै खुसियाली छाएको छ । भने रबि ओडका लागी नेपाली गीति सङ्गीतको छेत्रमा यो बिजय निकै महत्वपुर्ण अवसर हुने बिस्वास गरिएको छ ।
आफ्नो २४ वर्षीय श्रीमती परपुरुषसँग सल्केकी भेटेपछि निर्मम हत्या: छोरीको बयान – ‘आमाले हात जोडेपनि बुबाले हानिरहे’
मलेसियामा नेपालीले नेपालीलाई नै मले भाषा बोल्दै गरे निर्मम कुटपिट, को हुन् कुटपिट गर्ने व्यक्ति ? सक्दो शेयर गरौ (फोटो र भिडीयो सहित)